Ifulethi elithokomele leholide elinokubukwa nendawo yokubhukuda yamahhala - I-Airbnb
Ifulethi elithokomele leholide elinokubukwa nendawo yokubhukuda yamahhala
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Tove Bitsch
U-Tove Bitsch Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elincane elithokomele leholide elingu-49 eline-fjord view. Indawo yokungena, indlu yokugezela, ikhishi/igumbi lokuphumula nekamelo lokulala. Igumbi lokuphumula elincane elithandekayo langaphandle entshonalanga elinethala lelanga nethala lasekuseni empumalanga. Ifulethi lifudunyezwe ngempompi yokushisa kanye nokushisisa phansi egumbini lokugezela, kanye nesitofu sezinkuni esishisayo.
Vele ube amakhilomitha angu-2.5 ukuya edolobheni elithandekayo lezentengiselwano lase-Lemvig, lapho kukhona khona izindawo zokudlela, amathilomu nezitolo ezikhethekile ezithandekayo. Amakhilomitha angu-13 ukuya e-Fizzy North Sea, nokuyinto ehlala iyisipiliyoni. I-Thyborøn ingafinyelelwa emizuzwini engu-25 ngemoto, enechweba lokudoba elisebenzayo.
Ifulethi elithokomele kakhulu elisanda kulungiswa elinokubukwa okuhle phezu kwe-fjord
Indawo yokuhlala iyingxenye yesikhungo seholide, esinendawo yokubhukuda, izinkantolo zethenisi, njll. Kukhona ukufinyelela emshinini wokuwasha kanye ne-umble dryer ngemali. 500M kuya ebhishi elihle lefulegi eliluhlaza okwesibhakabhaka
Ibungazwe ngu-Tove Bitsch
Vi elsker vores lille ferielejlighed. Min mand Jan er gået på pension, og Jan vil gøre alt for at byde vores gæster velkommen og give dem informationer om området.
U-Jan uyakujabulela ukutholakala ezivakashini, nokho, uvame ukuba sejimini ekuseni. Inombolo yocingo izonikezwa lapho kufikwa
UTove Bitsch Ungumbungazi ovelele